Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Cade Muuse oo geeriyooday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynihii hore ee dowladda Puntland Cade Muuse oo geeriyooday
February 8, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Cade Muuse oo geeriyooday. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Puntland Maxamuud Muuse Xirsi oo loo yaqaan Cade ayaa ku geeriyooday magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, sida ay xaqiijiyeen xubno katirsan qoyskiisa.
Cade Muuse ayaa sanadkii 2006-dii ilaa iyo 2009-kii ahaa madaxweynaha dowladda Puntland.
Dhakhaatiir joogta dalka Hindiya ayaa 700 dhagaxuunta kelyaha ah kasoo saaray nin Soomaali ah, sida uu daabacay wargeyska The Hindu Times, oo soo xiganaya dhakhaatiirta qaliinka fulisay. Dhakhaatiirta oo ka howlgasha isbitaal gaar loo leeyahay [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Jimce ah toogasho ku dilay afar qof gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Afarta qof oo ay midi gabar tahay oo la sheegay in ay [...]